Siideynta warka Archives - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington
Archives Tag: War-saxaafadeed
OLYMPIA, WA-Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington waxay ku dhawaaqday barnaamij deeq oo cusub oo bilaabi doona Oktoobar 4 si loo caawiyo qaar ka mid ah meheradaha yaryar ee waxyeellada leh xiritaanka xadka Mareykanka iyo Canada. Xadka ayaa u xirnaa inta badan dadka safarka ah tan iyo bishii Marso 2020 sababtuna tahay masiibada COVID-19. Deeqaha Washington ee Shaqeeya: Barnaamijka Gargaarka Ganacsiga Xudduudka wuxuu diiradda saari doonaa meheradaha soo wajaha macaamiisha kuwaas oo la kulmay dhibaato gaar ahaan natiijada
Deeqaha Horumarinta Bulshadu waxay maalgeliyaan mashaariic maxalli ah oo mudnaan sare leh, oo ay ku jiraan biyaha dadweynaha, bullaacadaha, xaaladaha degdegga ah iyo hababka ilaalinta dabka, jidadka, guryaha, bakhaarada cuntada iyo kuwo kale. OLYMPIA, Wash. - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta ku dhawaaqday in 20 magaalo oo miyi ah, magaalooyin iyo degmooyin ay ka heli doonaan wadar ahaan in ka badan $ 11.4 milyan Deeqaha Horumarinta Bulshada (CDBG) ee 2021. 22 -ka mashruuc ee la maalgeliyay waxay: hagaajin doonaan biyaha miyiga, bulaacadaha, waddooyinka,
Joojinta adeegga COVID-19 wuxuu dhammaanayaa Sebtember 30; hoggaamiyeyaasha gobolku waxay ku boorriyaan macaamiisha ka dambaysa biilasha tamarta iyo biyaha inay la xiriiraan korontada oo ay sameeyaan qorshe ay adeegyadu ku sii jiraan
In ka badan nus malyuun reer Washington ah ayaa halis ugu jira in la xiro korontada, gaaska dabiiciga ah ama adeegyada biyaha OLYMPIA, WA-Baaqa deg-degga ah ee ka hortagaya in la xiro biyaha, korontada ama adeegyada gaaska dabiiciga ah ayaa loo qoondeeyay in la soo afjaro 30-ka bisha Sebtembar. tallaabooyin badan oo degdeg ah oo uu soo saaray Gov. Jay Inslee ka dib COVID-19. Hoggaamiyayaasha gobolka iyo hawl -wadeennada adeegga korontada ayaa qiyaasa in ka badan 500,000 oo reer Washington ah inay haystaan ​​biilasha soo daahay
Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah ee Ganacsiga ayaa abaalmarino siiya 18 mashruuc oo casriyeyn shabakad koronto oo casri ah oo ka faa'iideysanaya bulshooyinka Washington
Deeqaha ayaa maalgeliya mashaariicda shabakadda korontada oo ballaarin doona isticmaalka tamarta la cusboonaysiin karo iyo taageeridda adkeysiga bulshada. OLYMPIA, WA - Waaxda Ganacsiga ee Gobolka Washington ayaa maanta ku dhawaaqday ku dhawaad ​​$ 3.9 milyan oo deeq ah oo ay ka heshay Sanduuqa Tamarta Nadiifka ah ee gobolka oo loogu talagalay 18 mashruuc oo casriyeyn ah oo ku shaqeeya korontada gobolka oo dhan. Iyada oo korontada Washington ay u sii socoto ujeeddada gobolka ee ah 100% koronto nadiif ah marka la gaaro 2045, mashaariicdu waxay hormarin doonaan tiknoolojiyada tamarta la cusboonaysiin karo ee kala duwan
Warbixin cusub: Heerka wareejinta shaqaalaha ee xoogga leh ayaa xoogga saaraya baahida degdegga ah ee lagu taageerayo shaqaalaha daryeelka carruurta si loo kordhiyo helitaanka iyo awood -u -helidda daryeel tayo leh
Kooxda Waxqabadka Daryeelka Carruurta ee Washington waxay sii deysaa istiraatiijiyad ku dhisan maalgashiga Fair Start ee taariikhiga ah, waxayna ku baaqeysaa in xoogga la saaro kobcinta shaqaalaha daryeelka carruurta. OLYMPIA, WA - Ciidanka Hawl -wadaagga Daryeelka Carruurta ee gobolka Washington ayaa soo saaray istiraatiijiyad cusub oo dhammaystiran oo xoogga saareysa deg -degga ah in la xoojiyo shaqaalaha xanaanada cunugga iyada oo ay jirto xaddiga wareejinta ee 43 boqolkiiba. Istaraatiijiyada Helitaanka Daryeelka Carruurta ee Gobolka Washington ee cusub ayaa cad
Guddiga Hawlaha Guud ayaa ansixiyay maalgelinta Deymaha Dhismaha iyo Dhismaha
In ka badan $ 123 milyan oo abaalmarinno ah oo la siinayo bulshooyinka maxalliga ah ee ku baahsan gobolka OLYMPIA, Wash.-Kulankoodii guddiga ee 6-dii Ogosto, Guddiga Hawlaha Guud ee Gobolka Washington wuxuu ansixiyay maalgelinta Barnaamijyadooda Dhaqameed ee Deynta Dhismaha iyo Dhismaha ka hor. Lacagtani waxay ka faa'iideystaan ​​bulshooyinka maxalliga ah ee wax ka qabanaya kaabayaasha lix nidaam oo kala duwan: waddooyin iyo waddooyin, buundooyin, biyaha gudaha, biyaha duufaanta, bullaacadaha fayadhowrka, iyo qashinka adag iyo dib -u -warshadaynta. Amaahda Dhismaha Horudhac: Qaybtan, maamullada waxay soo gudbiyeen toddoba arji wadar ahaan
Page1 Page2 Page3 ... Page8 Next »